ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): နှစ်ချို့အနာနှင့်အလင်းတံခါး
ပြန်လည်တူးဖော်သီကုံးချင်တယ် .. ။
(ငါ) သရုပ်ဖော်နေရတုန်းပဲ .. ။
ဘယ်အတိုင်းအတာထိမျိုသိပ်ထားရမှာလဲ .. ။
ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံးသွေးချင်းချင်းနီသွားရတယ် .. ။
အလင်းတံခါးကိုဖွင့်ပေးထားပါတယ် .. ။
Posted by LIN LET KYAL SIN at 4:23 PM
လင်းလင်းရေ ကဗျာလေးကလှတယ် အရောင်ဖျော့ဖျော့လေးဘဲ ဒါပေမယ့်လှတယ်
in this life, nothing is unpridictable...sis.. so..
we should hope for the best and we also need to prepare for the worst :)
ကဗျာဆိုတာ နှလုံးသား ခုန်နှုန်းနဲ့အတူ ခံစားပြီး ပုံဖော်ပေးတာဖြစ်တယ်တဲ့... အဲဒီလို ပုံဖော်ပြီး ခံစားချက်တွေကို ပရိဿတ်တွေ မျှဝေခံစားပေးဖို့ လုပ်တာဟာလည်း ကဗျာသမား... စာသမားတွေပဲတဲ့ အဲဒီလိုပဲ လင်းလက်ကြယ်စင် (ခေါ်) ဂျူးလိယက် ဟာလည်း ပြည်သူချစ်တဲ့ ကဗျာသမား စာသမားဖြစ်သလို ကိုယ့်အကျိုးကို နောက်ထားပြီး အများရဲ့ရင်ထဲကို ၀င်ကြည့်ခံစားပြီး ပြန်လည် ပုံဖော်ပေးတယ်လို့ပဲ မြင်တယ်... ကဗျာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခွန်အထူး ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးနော်..
(ငါ) သရုပ်ဖော်နေရတုန်းပဲ .. ။ This paragraph touches my heart. This is very good poem my sister. Keep it up.
ကဗျာ အရမ်းကောင်းတယ်။ စာကြောင်းတိုင်းက power အပြည့်ပဲ။ တင်စားထားတာတွေ မိုက်တယ်။ ကဗျာအသစ်တွေဆက်မျှော်နေပါတယ်။ လင်းလက် tag ထားတာတော့ နက်ဖန်မှပဲ ရေးတော့မယ်နော်။
အရမ်းကောင်းတယ်မမ။ ကဗျာကို မဖတ်ရတာကြာလို့လားတော့မသိဘူး။ သိုးလေးတောင် Pasternak ဆီက မှီငြမ်းပြီး တင်ထားသေးတယ်။
(ငါ) သရုပ်ဖော်နေရတုန်းပဲ ဘယ်အတိုင်းအတာထိမျိုသိပ်ထားရမှာလဲ to လင်းလက်ကြယ်စင်
thak you very much for your words
ဒီကဗျာပုံစံမျိုး မဖတ်ရတာကြာပြီ။ ကောင်းတယ် ညီမ။
ဒီကောင်မလေး စိတ်ကူးပေါက်ရာ ကဗျာတွေ ကိုရေးရင်းကနေ ဒီလိုကဗျာလေးတွေ ရေးတတ်လာခဲ့ပြီ တဖြည်းဖြည်းနဲ့လည်း ရင့်ကျက်လာခဲ့ပြီ ၀မ်းသာပါတယ် မဂျူးလေးရေ ဖောင်တွေက တလွဲတွေထွက်နေမယ်ထင်ပါတယ်